साहित्य/मनोरञ्जन – Sitalpati
सुर्खेत (वीरेन्द्रनगर)- कर्णाली प्रदेश पर्यटकीय रूपमा आफैंमा सुन्दर छ । यस क्षेत्रमा परापूर्वकालदेखि नै पर्यटकीय गन्तव्य गनिनसक्नु छन् । स्वर्गकी अप्सरा रारा, पानीमाथि ज्वाला बल्ने श्रीस्थान नाभीस्थान, देउरापाटनजस्ता रमणीय र...
कुमार रेग्मीको आधुनिक गीत ‘मैले माया गर्दा’
सुर्खेत । दैलेखी युवा कुमार रेग्मीको आधुनिक गीत ‘मैले माया गर्दा’ सार्वजनिक हुने तयारीमा छ । रेग्मीकै शब्द तथा भाषा रहेको सो गीतमा प्रमोद खरेलकोको स्वर रहेको छ ।...
जब निलिमाले आफ्नै बाबाले लेखेको गित गाइन !
काठमाडौं । मिस युनिभर्स नेपालको प्रतियोगिताको लागी अहिले इच्छुकहरु सामाजिक संजालमा सहयोग मागिरहेका छन् । मिस युनिभर्स नेपाल नामको एप मार्फत उक्त प्रतियोगिता भैरहेको छ । मिस युनिभर्स नेपालमा...
मैले ‘मिस’ गरेको त्यो दसैँ !
हामी लामो समयदेखि चाबहिल (बोलिचालीमा चाबेल) क्षेत्रमा बस्दै आएका हौँ । चाबेल सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न ठाउँ पनि हो । त्यसैले चाडपर्वका समयमा चाबेलमा आफ्नै किसिमको रौनक रहन्छ । चाबेल...
सितलपाटी संवाददाता २०७७, ८ कार्तिक शनिबार
महान चाड बडादशैंको आठौं दिन आज महाष्टमी पर्व मनाइँदै छ । आज आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिनमा नेपालीहरुले दुर्गाभवानीको विशेष पूजाराधना गरी भव्यरुपमा मनाउँछन् । आज महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको...
रासस २०७७, ८ कार्तिक शनिबार
हिन्दूको महान् चाड दसैंतिहारमा पिङ हाल्ने र खेल्दै आए पनि केही वर्षदेखि हाम्रो मौलिक संस्कृति हराउँदै गएको छ । लमजुङका गाउँगाउँदेखि ठूला शहरबजारमा दशैँ आउनु केही समयअघिदेखि पिङ हालेर...
‘कर्णाली हाम्राे घुम्न्या ठाउँ, सबैलाई अब चिनाऔं’ (भिडियाे)
सुर्खेत । ‘कर्णाली राम्राे घुम्न्या ठाउँ, सबैलाइ अब चिनाऔं’ गीतमा भनेजस्तै कर्णालीलाइ चिनाउन आवश्यक देखिएका छ । प्राकृतिक साैन्दर्यताले भरीपूर्ण कर्णालीलार्इ चिनाउन हरि कंडेलले ‘कर्णाली घुम्न्या ठाउँ’ लोक देउडा...